Iwo mawebhu giants anoda kuenzanisa web extensions | Linux Vakapindwa muropa
Apple, Mozilla, Google neMicrosoft vabatana Kuti ugone kutsigira vanogadzira ekuwedzera, nekuti pasina kupokana Chrome ndiyo inonyanya kushandiswa mubrowser uye pane vanogadzira vanofarira zvakare kuisa pfungwa yavo kugadzirwa kwekuwedzera, vachisiya mamwe mabhurawuza.
Ndosaka boka idzva renharaunda "WebExtensions" ichaedza kugadzira zvakajairika kuvaka kwekuwedzera webhu kuwedzerwa uye inokoka vanogadzira kuti vabatanidze chirongwa ichi. Safari yatora nyowani webhu yekuwedzera API ine macOS Big Sur iyo inobvumidza izvo zvakawedzeredzwa kune mamwe mabhurawuza kushanda nayo. Izvi zvakavhura musuwo wekuwedzeredzwa kutsva, asi nzira yakamisikidzwa yekukudziridza yakanga isati yatsanangurwa.
Boka idzva, rakapfupikiswa WECG, inoumbwa nenhengo kubva kune yega yevakuru mainjiniya ekuvandudza. Tichitungamira iri boka nyowani, tinowana Timothy Hatcher anobva kuApple naSimeon Vincent vanobva kuGoogle. Vazvino vatori vechikamu vanosanganisira vashandi vanobva kuApple, Mozilla, uye Microsoft.
World Wide Web Consortium, mutumbi unoona nezve kusimudzira kuenderana kweWorld Wide Web matekinoroji, yakataura nezve chiito ichi:
“Tinofara kuzivisa nezvekuparurwa kweWebExtensions Community Group (WECG). Nemabhurawuza akasiyana siyana achitora modhi inotsigirwa yakawanda yekuwedzera mumakore apfuura, WECG inofara kuongorora kuti vatengesi vebrowser nevamwe vanobatana vanogona sei kushanda pamwechete kusimudzira yakajairika browser yekuwedzera chikuva. Apple, Google, Microsoft, neMozilla vari kuvhura iri boka renharaunda, uye tinokoka vamwe vatengesi vebrowser, vanogadzira zviwedzero, uye mapato anofarira kujoina chirongwa ichi *. «
Iyo WebExtensions Nharaunda Boka ine zvinangwa zviviri chii chiripo ita kuti zvive nyore kune vanogadzira kuti vagadzire zvinowedzera kudoma modhi inoenderana uye yakakosha musimboti wemabasa, APIs, uye mvumo. Ivo zvakare vanorondedzera dhizaini inovandudza mashandiro uye yakatonyanya kuchengetedzeka uye inopokana nekushungurudzwa.
Iri boka haridi kudoma zvinhu zvese zvewebhu yekuwedzera chikuva kana kumisa hunyanzvi. Wese mubhurawuza mupi acharamba achishanda akazvimiririra nemaitiro avo. Vagadziri vebhurawuza uye vatengesi vanofarira kupa kuboka vanogona kunyoresa kuburikidza newebhu W3C. Iyo WECG ine yakatsaurirwa GitHub repository ine tsamba yebasa uye kubudirira munharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iwo mawebhu giants anoda kuenzanisa iwo ekuwedzera ewebhu